IBM Inozivisa Matatu Nyowani Akavhurwa Source Projekti | Linux Vakapindwa muropa
IBM yakafumura hutatu hweKubernetes-yakavakirwa mapurojekiti nhasi, yakavakirwa pane iyo Razee chirongwa chakatangwa muna Chivabvu.
Iyo kambani yashandisa 2019 OSCON (O'Reilly Open Source Convention) chiitiko kutanga matatu mapurojekiti, Kabanero, Appsody uye Codewind, zvese kuitira "kugadzira uye kushambadzira kunyorera kweKubernetes zviri nyore uye nekukurumidza."
Ipo Kabanero iri nyeredzi chirongwa chevatatu ava, vamwe vaviri vanofanirwa kutaura zvishoma nezvazvo.
Appsody inoitirwa batsira vanogadzira kuti vagadzire microservices ezvinodiwa uye zvinodiwa nemasangano avo, uchishandisa masutu uye matemplate eakavhurika sosi masisitimu uye nguva yekumhanya, zvichipa hwaro hwekuvaka Kubernetes kunyorera. Mastacks anogona kugadziriswa sezvinodiwa uye zvechokwadi anoshandiswa muKabanero, masaga akatsigirwa izvozvi iJava MicroProfile, Java Chitubu, Node.js, Node.js Express uye Swift.
Codewind, zvakadaro, chirongwa che ipa ekuwedzera kumaIDE, kutanga neVS Code, Eclipse, uye Eclipse Che, kuvabvumidza kuti vashandiswe mumashandisirwo emidziyo. IBM pachayo inotaura kuti Codewind inokutendera iwe kuti ugadzirire mumidziyo, kunyangwe iwe usingazive kugadzira mumidziyo. Kabanero uye Appsody vachashandisa Codewind.
Chekupedzisira, Kabanero, chirongwa chinoedza kubatanidza mapurojekiti akadai saKnative, Istio naTekton, pamwechete neCodewind, Appsody uye Razee ku «Bvumira vashandisi kugadzira, kutsikisa, uye kuchengetedza zvishandiso paKubernetes."Chirongwa ichi chinosanganisira" Yakavakirwazve masisitimu eKubernetes neKnative kuitira kuti vanogadzira vashandise nguva yakawanda vakatarisa kuchikumbiro uye vasinganyatsonzwisise zvigadzirwa.
Iyi trio debuts mwedzi mishoma mushure mekunge IBM yatanga Razee, yakavhurwa sosi chishandiso chekutungamira Kubernetes hova pamasumbu mazhinji.
Zvakare, zvakakosha kuti uzive kuti kuburitswa uku kunouya chete vhiki yapfuura IBM ichapedzisa kutenga kweRed Hat.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » IBM inozivisa matatu matsva akavhurwa sosi mapurojekiti